Okwu ịgba akwụkwọ maka ebe a na-adọba ụgbọala ejiri mma gbuo mmadụ | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Gba akwụkwọ maka ebe a na-adọba ụgbọala gburu site na mma na igbe
di Paolo Tescione - Eprel 21, 2021
Gburu na a dina n'obi iji chebe nwa ya nwanyị n'oge esemokwu ụgbọala. Otu a ka Maurizio Cerrato, 61 gbara site na Torre Annunziata nwụrụ. Na mwakpo mgbede ụnyaahụ, Mọnde 19th Eprel, esisịt ini ke 21 pm, ke ndịbe square ke via IV novembre. Ọ bụ ichu nta maka onye na-eme ihe ike, onye gbalagara. Onyeisi obodo ahụ na-akpọsa iru uju obodo.
Ọ bịarutela oku ada Maria Adriana onye chọtara wiilị ụgbọ ala ahụ dọwara adọka. Mgbe ahụ, ìgwè ehi nke mmadụ ise wakporo.
I Carabinieri ha nwetara onyonyo nke usoro onyunyo vidiyo. Nyocha na-aga n'ihu iji dokwuo anya na ihe dị egwu nke eziokwu ahụ ma soro onye kụrụ afọ iri isii na otu.
Lite maka ebe a na-adọba ụgbọala: ike
Ihe na-agbanwe agbanwe nke ihe merenụ ka ga-edo anya. Dị ka akpa nwughari, Nwa nke Maurizio na onye ozo na-agbarita uka banyere obi uto banyere ugbo ala na ugbo ala nke di na IV Novembre na Torre Annunziata
Ada onye a tara aja Facebook o nyere nsụgharị na-esonụ: “Achọrọ m ime ka o doo anya na o zighi ezi ịsị na nna m nwụrụ n’esemokwu, nna m zoro ezo n’ụzọ zuru oke, naanị iji chebe m, onye bụ ìhè nke anya ya. Ejiri papa m maa ma o nweghi ihe jikọrọ ya na ndị a ”. Ka anyị kpee ekpere maka nwoke a e gburu egbu na maka ezinụlọ ya.
Ekwensu nwere ike banye na ndụ gị site na ụzọ 5 ndị ​​a
Egburu ya dị afọ 19 iji chebe nne ya
N'ihi na uka ụbọchị ụka bụ ọrụ
Akwụkwọ ozi edetu nye ada anyi nwanyị maka ọnwa Mee
Nwatakịrị nwanyị dinara n'ike: nna ya katọrọ ya "Nwa m nwanyị drunkụbigara mmanya ókè"
Mmehie nke mbụ bụ nkọwa nke oge a
Di ya gburu ya na nkịta ahụ